Steve Jobs: Elekwasị anya, Ọhụụ, Nhazi | Martech Zone
Sunday, December 18, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na Podcast nke Fraịdee, anyị tụlere akwụkwọ kacha mma anyị ga-agụ n'afọ a, ma, ọkacha mmasị m bụ Steve Jobs. Agụbeghị m ọgụgụ n’oge na-adịbeghị anya - enwere m nnọọ ekele Jenn maka izutara m akwụkwọ a!
Akwụkwọ a abụghị ịhụnanya-fest maka Ọrụ. N'ezie, echere m na ọ na-akwụ ụgwọ ihe ziri ezi ebe ọghọm nke Ọrụ bụ nsogbu ọchịchị aka ike ya. M na-ekwu ọchịchị aka ike makana mmetụta ọ metụtara ahụike ya, ezinaụlọ ya, ndị enyi ya, ndị ọrụ ya na azụmaahịa ya. Ọtụtụ mmadụ na-ele Apple anya na ụjọ awe dịka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị baa uru na mbara ụwa. Otú ọ dị, e nwere ihu ala… Apple na-achị otu oge dị ka onye ndu na ụlọ ọrụ PC wee hapụ ụkwụ ya.
Ezu nke na-adịghị mma… Ọrụ n'ezie bụ mmadụ pụrụ iche. Njikere laser na ọhụụ ya, jikọtara ya na uto na-enweghị mgbagha na imewe mere ụlọ ọrụ ya pụrụ iche. Ọrụ gbanwere ụlọ ọrụ kọmputa desktọọpụ, ụlọ ọrụ mbipụta desktọọpụ, ụlọ ọrụ egwu, ụlọ ọrụ ihe nkiri na-eme egwuregwu, ụlọ ọrụ ekwentị na ugbu a ụlọ ọrụ mbadamba. Ọ bụghị naanị imewe, ọ gbanwere n'ezie ụzọ azụmaahịa ndị ahụ si arụ ọrụ.
Abụ m otu n'ime ndị nkatọ mgbe Apple kwuru na ọ na-emepe ụlọ ahịa mkpọsa. Echere m na ọ bụ mkpụrụ… karịsịa ebe ọ bụ na Gateway na-emechi nke ha. Ma ihe m na-aghọtaghị na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa abụghị maka ire ngwaahịa, ha na-eche maka ị gosipụta ngwaahịa ahụ n'ụzọ Ọrụ chọrọ ka ha gosipụta. Ọ bụrụ n’abeghị ụlọ ahịa Apple, ị kwesịrị ịlele ya. Ọbụlagodi na ị gara ileta Buy kacha mma, ị ga - ahụ etu esi gosi Apple.
Walter Isaacson bụ akụkọ na-atụ n'anya na m na-arapara na akwụkwọ ahụ ozugbo m mepere ya. E nwere caricature nke Ọrụ anyị niile hụrụ, mana akwụkwọ ahụ nwere ọtụtụ nkọwa dị ịtụnanya site na ajụjụ ọnụ a gbara ndị nọ n'otu ọnụ ụlọ ahụ. Ọ bụghị na akwụkwọ ahụ enweghị ntụpọ. Na nso nso a, Forbes ghaputara ihe di iche akụkọ banyere iche iche mkpọsa.
Onwe m, ozi m siri na akwụkwọ a pụọ ​​bụ na a ga-enwe ihe ịga nke ọma mgbe ị na-adịghị ala azụ n'ịchụso ọhụụ gị. Ọ dị m ka ọ bụrụ na azụmaahịa anyị nwere naanị ihe ịga nke ọma dịka anyị raara onwe anyị nye ịbunye ndị ahịa anyị nnukwu ọrụ. Amaghị m na m dị njikere ịchụ ihe dịka Ọrụ mere iji ruo ebe ahụ. N’echiche, enwere ike imeri ọtụtụ agha, mana ejighi m n’aka na ọ meriri n’agha ahụ.
Ọ ga-amasị m ịnụ echiche gị na akwụkwọ a!
Tags: arụ ọrụ
Mbido Avatar: Oyi ma obu Okike?